सन्जाल बहस - www.khabardabali.com | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more सन्जाल बहस - www.khabardabali.com
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेर सरकार बनाउने बताएका छन्। बानेश्वरमा बुधबार दिउँसो बसेको उक्त समूहको बैठकमा प्रचण्डले प्रतिनिधि...
भदौ २८ गते, २०७७ - १६:२८
काठमाडौं । नेपालका अधिकांश इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले युट्युब, फेसबुक र ट्विटरबाट मिथ्या सूचना प्राप्त गर्ने गरेको देखिएको छ । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालको सर्वेक्षणले सहभागीमध्ये ९५.५ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले...
जेठ ६ गते, २०७७ - १७:०४
काठमाडौं । जनता समाजवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीमा अल्पज्ञान र अहंकार ककटेल देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । मंगलबार नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको जवाफ सुनेपछि...
काठमाडाैं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सरकारले नयाँ नक्सा बनाउने तयारी गरेकाले त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग नगर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेकी छिन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत फेसबुकमार्फत...
काठमाडौं । पछिल्लो समय केहि सामाजिक सञ्जाल तथा केहि सञ्चार माध्यममा अनौठो कुरा भाईरल बन्यो, जसमा शाकाहारी मानिसलाई कोरोना नलाग्ने उल्लेख छ । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)लाई आधार बनाउँदै प्रचार गरिएको उक्त...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदिप पौडेलले प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन सुझाव दिएका छन् । उनले ओलीमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने नैतिकता नभएको भन्दै राजीनामा दिन सुझाव दिएका हुन्...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको श्री ७ खड्ग शमशेर बन्ने सपना तुहिएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले कडा व्यंग्य हानेका छन् । दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको घटनाप्रति टिप्पणी...
बैशाख ११ गते, २०७७ - १५:५४
काठमाडौं । नेकपा नेता भीम रावलले लोकतन्त्रमा लुटतन्त्र, गुटतन्त्र र धनतन्त्र हुन नसक्ने बताएका छन् । लोकतन्त्र दिवसको दिन शुभकामना सन्देश सार्वजनिक गर्दै उनले समानता, न्याय, समृद्धि र शान्ति नै लोकतन्त्रको प्राण...
काठमाडौं । वाम राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अनिष्टकारी र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन् । श्रेष्ठले कोरोना महामारीले निम्त्याएको...